Ganacsato Soomaali ah oo dukaamadoodii lagu boobay Koonfur Afrika, qaarna la dhaawacay. – Radio Daljir
Luulyo 21, 2012 3:50 g 0
Cape-town, July 21 – Dukaamo ganacsi oo ay dad Soomaali ahi lahaayeen ayaa lagu boobay qaarna lagu gubay waddanka Koonfur Afrika dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey.
Dukaamada la boobay ayaa lagu soo warramayaa in ay ku yaalliin tuulooyin dhawr ah oo u dhaw magaalada Cape-town ee waddankaasi koonfurta Afrika, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan dukaamada qaarkood in dab la qabadisiiyey boobitaan kaddib.
Illaa afar ruux oo Soomaali ah ayaa weerarkaasi dukaamadooda lagu boobay ku dhawacantay, kuwaasi oo ay soo gaareen waxyeellooyin qaarkood culus yihiin sida uu noo xaqiijiyey Maxamed Axmed Muuse oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan.
Ganacsadahaasi, waxaa sidoo kale uu sheegay weerarkaasi dukaamada lagu qaaday in uu abuuray walwal iyo cabsi ballaaran oo ku aaddan ku sii nagaanshaha deegaannada la weeraray taasoo Soomaalida la soo gudboonaatay.
Ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale weerar loogu qaado goobo ganacsi oo dad Soomaali ahi ay ku leeyihiin dalka Koonfur Afrika, waxaana dhaca falal joogta ah oo iskugu jira, dil, dhaawicid, boobid hantiyeed iyo tacadiyo kale oo intaasi ka badan.